Ngaphezulu kwama-250 iipateni zejiyometri ezinkulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaphezulu kwama-250 iipateni zejiyometri ezinkulu
Ukuba senza uphando nge Iipateni zejiyometri Singafumana amakhulukhulu okanye mhlawumbi amawaka, kodwa uninzi lunento efanayo, banokuchukumisa Uhlobo lwe-retro. Kungenxa yokuba bekukho kwifayile ye- Iminyaka 50-60 ungahlala nini i Ukuqhamuka koyilo olunezinto zejometri Kwaye nangona kamva bekukho iminyaka embalwa xa olu hlobo lwalungaphandle kweendlela kunye nefashoni, malunga neminyaka emi-3 i-retro ibuye yabonwa kwakhona kwiindawo ezininzi.
Ukongeza, abayili bayazi lungisa kwaye uyile kwakhona iipateni ze-retro kwesona sitayile sincinci ngaphandle kokungawahoyi amanani ayo ejiyometri amele olu hlobo kodwa alungelelanise neemfuno zecandelo labathengi abanokungawathanda loo manani makhulu kakhulu ngeetoni zemibala eqaqambileyo kwaye ukhethe into ecekeceke ngakumbi.
Uyawubona umahluko phakathi kweyona retro yodidi kunye nolungelelwaniso lwayo ukuza kuthi ga ngoku ngokuthelekisa le mifanekiso mibini kweli nqaku. Ukongeza, i-Naldz Graphics ilungiselele ukudityaniswa okukhulu kokungaphezulu Iipateni ezingama-250 zamahhala zejometri onokuzikhuphela ukuze uzisebenzise kuyilo lwakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iipateni » Ngaphezulu kwama-250 iipateni zejiyometri ezinkulu
Iitemplate ze-Wordpress ezingama-34 zasimahla kunye nothelekiso lweempawu zazo
Izinto ezingama-20 onokungazazi malunga nePop Art kunye noyilo lwegraphic